Ku jeesjeeska qalabka xafiisyada ee shirkadda | Hal-abuurka Online
Qalabka xafiisyada ee shirkadu waxa ay tilmaamaysaa summaynta summada, ama waxa sidoo kale loo yaqaan summaynta shakhsi ahaaneed. Waxay ku saabsan tahay samaynta dhammaan walxaha qayb ka ah shirkadda oo lagu daabaco aqoonsi isku mid ah, shakhsiyad iyo qiime kala duwanaansho ah. Sidaa darteed, marka hal-abuurka loo wakiishay inuu sameeyo, majaajilada qalabka xafiisyada ee shirkadu waxay ku fiican yihiin soo bandhigida naqshadaha sababtoo ah, habkan, waxay u arkaan mid macquul ah.
Laakiin, Waa maxay maaweelada qoraalka ee shirkadda la isticmaali karaa? Internetka waxaad ka heli kartaa noocyo badan oo iyaga ka mid ah, labadaba bilaash iyo lacag. Oo waxaanu samaynay xulashada kuwa ugu fiican, ee bilaashka ah, si aad ugu soo bandhigto shaqadaada macaamiishaada qaab xirfad leh.
1 Laakiin waa maxay jeesjees?
1.1 Iyo majaajilada qalabka xafiisyada ee shirkadu?
2 Jees-jeesyada qalabka xafiisyada bilaashka ah ee shirkadaha: naqshadaha ugu fiican
2.1 Majaajilada Desktop-ka ee shirkadda
2.2 Abuur kale oo ah qalabka waraaqaha
2.3 Majaajilada caanka ah
2.4 Maadays qalabka wax lagu qoro
2.5 jeesjeeska ugu yar
2.6 Jees-jees dhab ah
2.7 Maadays midab leh
2.8 Maadays sawir leh
2.9 Majaajilada aasaasiga ah ee qalabka waraaqaha
2.10 Majaajilada qalabka xafiisyada ee shirkadda
Laakiin waa maxay jeesjees?
Waxaan ku qeexi karnaa jeesjeeska inuu yahay matalaad nashqad ah oo lagu sameeyay aaladaha tafatirka sawirka si ay ugu muuqato "dhab ah". Taasi waa, adiga ayaa lagu soo bandhigay sawir u ekaysiinaya xaqiiqada.
Tusaale ahaan, qiyaas in lagu waydiiyo inaad samayso kaadhka ganacsiga. Halkii aad isaga tusin lahayd naqshadda lafteeda, waxa aad samaynayso waa in aad tustaa sawir leh kaarar ganacsi oo leh nashqada aad samaysay. Sidan, macmiilku wuxuu heli karaa fikrad wanaagsan oo ku saabsan waxa ay u ekaan lahayd xaqiiqda haddii ay daabacaan naqshadaada.
El Hadafka jeesjeeska waa in laga caawiyo dadka inay arkaan natiijada ugu dambeysa ee naqshadaha la sameeyay, si aad u arki karto khaladaadka, nuances ama si fudud u aragto sida ay u egtahay.
Iyo majaajilada qalabka xafiisyada ee shirkadu?
Sawirka astaanta shirkadda, labadaba khadka iyo jirka, ayaa sii kordheysa muhiim. Dhab ahaantii, waxaan dhihi karnaa taas xitaa waa kaadhkaaga ganacsi oo waa in lagu dhejiyaa meel kasta: shabakadaha bulshada, website-ka, xubno jidheed (buugaagta xusuus qor, kaararka ganacsiga, qalimaan, iwm).
Sababtan awgeed, majaajilada noocan ah ayaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo shirkadaha naqshadaha walxaha loo isticmaali karo si ay u arkaan saameynta ay ku gaari karaan.
Jees-jeesyada qalabka xafiisyada bilaashka ah ee shirkadaha: naqshadaha ugu fiican
Marka aan caddaynay waxa ay yihiin maaweelada iyo muhiimada ay u leeyihiin macaamiisha iyo xitaa naqshadeeyaha, waa waqtigii aan ku ogeysiineyno kuwa ugu fiican ee naqshadaha bilaashka ah ee aan ka helnay internetka.
Majaajilada Desktop-ka ee shirkadda
Haddii macmiilkaagu ku weydiiyo taxane ah naqshadaynta walxaha miiska, sida warqadaha, koobabka, muraayadaha, qalimaan, kaararka ganacsiga, iwm. Tani waxay noqon kartaa ikhtiyaar.
Waxaan aragnaa hal dhibaato oo kaliya oo ah in ay u muuqato in ay ku jirto madow iyo caddaan, markaa haddii calaamaddu midab leedahay si fiican looma qaddarin doono. Soo noqoshada, waxay leedahay 9 aragtiyood oo kala duwan kuwaas oo kaa caawinaya inaad fikrad fiican hesho.
Abuur kale oo ah qalabka waraaqaha
Xaaladdan oo kale waxaan raacnaa buugaag xusuus qor, warqad, ajandeyaal, iwm. Halkan waxaad ku arki kartaa naqshad aad u faahfaahsan, iyo midab, oo aad mar walba jeclaan doonto.
Si kastaba ha ahaatee, majaajiladaani waxay si aad ah diiradda u saari doontaa shirkadaha aadka u daran maadaama asalka sawirka guud ahaan uu mugdi yahay iyo haddii shirkadu ay ka badan tahay "caddaan" ama firfircoon, waxaad samayn kartaa khaladaad markaad soo bandhigto mashruuca.
Majaajilada caanka ah
Tani way ka yara nadiifsan tahay, laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa inay leedahay dhawr waxyaalood oo keliya: warqad warqad, baqshadaha, gal iyo kaarka ganacsiga (hore iyo dhabarka).
Waxay u muuqataa mid aad uga dhalaal badan kuwii aan hore kuu tusinnay, laakiin haddii lagu waydiiyo curiye dheeraad ah waxay ahaan lahayd mid gaaban.
Maadays qalabka wax lagu qoro
Haddii aan horay uga hadalnay in naqshadii hore ay ahayd mid aad u yar, middan waxaad haysataa wax kasta oo ficil ah. Oo waa in ka mid ah walxaha waraaqaha shirkadaha, shaki kuma jiro in ku dhawaad ​​wax kasta oo aad u malayn karto in ay u baahan yihiin in ay halkan ka muuqan doonaan. Waxa ugu fiican ayaa ah in asalka uu yahay caddaan wuxuuna ku siinayaa aragti leh xaglo kala duwan oo arrimahan oo dhan ah.
Dabcan, waa dembi in xaqiiqda ah in soo bandhiga laakiin kuma jiraan xaalado "waaqici ah"., sida in miiska la dul saaran yahay, ama uu qof sido. Weli, naqshadani waa mid aad u fiican.
jeesjeeska ugu yar
Xaaladdan oo kale, waxay u muuqataa sida haddii canaasiirta shirkadu ay sabbaynaysaan hawada. Waxaad haysataa warqad, baqshadaha (hore iyo gadaal), kaadhka ganacsiga (sidoo kale hore iyo gadaal) iyo gal.
Aad bay u fudud tahay, laakiin naqshadahaas meesha walxahan laga codsado, waxay ku fiicnaan kartaa in la arko qaabka.
Jees-jees dhab ah
Waxaan si gaar ah u jecelnahay kan sababtoo ah, inkastoo waxay ina soo bandhigaysaa naqshad yar (oo leh waxyaabo yar), haa si dhab ah ayey u qabataa, iyagoo awood u leh inay u arkaan ku dhawaad ​​sidii haddii horeba loo ciyaari karo.
Waad heleysaa Halkan.
Maadays midab leh
Xaaladdan oo kale, waxaad qarin kartaa ama muujin kartaa walxaha aad rabto, ka saara ama ku dhejin kartaa rabitaan, iyo sidoo kale midabka asalka ah.
Sidan ayaad ku bixinaysaa a dulmar ku saabsan wax kasta oo ka kooban sumadda. Dabcan, xusuusnow in bandhig wanaagsan uu sidoo kale ka dhigi karo inay aqbalaan naqshadeynta.
Maadays sawir leh
Iyadoo wadar ahaan 8 sawir oo kuu ogolaan doona inaad ka dhigto macmiilka inuu ka eego dhinacyo kala duwan iyo sawirada naqshadaha aad abuurtay ayaa soo jiidan doona dareenka, gaar ahaan naqshadaha midabada leh tan iyo, oo leh asalka cad, waxay u soo bixi doonaan wax badan.
Majaajilada aasaasiga ah ee qalabka waraaqaha
Xaaladdan oo kale waxay diiradda saaraysaa waxa noqon lahaa kaarka ganacsiga, baqshadda, warqadda iyo galka. Laakiin adoo dhigaya dhammaan walxaha, mid ka mid ah kan kale, waxay abuurtaa natiijo fiican oo kuu ogolaanaysa inaad aragto sida muuqaalka muuqaalka uu noqon doono.
Waxa kale oo ay leedahay sawiro badan si aad u aragto xaglo iyo bandhigyo kala duwan.
Majaajilada qalabka xafiisyada ee shirkadda
Haddii shirkadda macmiilkaagu ay la xiriirto dharka ama dukaamada, tani waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan oo lagu soo bandhigo naqshadahaaga. Waana in aad awooddo naqshadeyso bacaha, funaanadaha, waraaqaha iyo kaararka ganacsiga.
Intarneedka waxa aad ka heli kartaa nashqado kale oo badan oo kala duwan taas oo ku xidhan waxa laguu igmaday qalab-qoraalka. Waxa ugu muhiimsan ee kiiskan waa in la doorto majaajilada waraaqaha shirkadaha ee si fiican ula socda shakhsiyadda ay shirkadu rabto in ay bixiso tan, haddii aad doorato mid khaldan, iyada oo aan loo eegin sida ay u wanaagsan tahay naqshadeynta, lama arki doono oo taasi waxay noqon kartaa. ka dhigi inaad ku celiso habka. Wax shaki ah miyaad ka qabtaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Jees-jeeska qalabka waraaqaha ee shirkadda